Teknolojiyadda - Farsamaynta Filter
R&D suuqa u jihaysan
Waxaan mudnaanta siinaa baahiyaha iyo rabitaanka suuqa si aan u abuurno badeecado buuxiya baahidaada. Waxaan si joogto ah u wanaajineynaa faylalkayaga wax soo saarka iyo sidoo kale qaab -dhismeedka badeecada oo leh tiknolojiyad cusub si loo bixiyo xalal kala duwan loona yareeyo wareegga horumarinta wax soo saarka. Si dhakhso ah uga jawaabista suuqa iyo xalkayaga shaqsiyeed ayaa naga caawiya inaan ku helno tartan dheeraad ah suuqa.
Shatiyada Hal -abuurka
Shatiyada loogu talagalay Habka Adeegga
Shatiyada loogu talagalay Naqshadaha Dibadda
Teknolojiyadda shaandhaynta isku -dhafan ee samaysan
Waxa runtii ka dhigaya waayo -aragnimo isticmaale oo aad u weyn ayaa aad uga badan kaliya ku siinta waxaad weydiisato. Waxaan raacnaa ujeeddada inaan ku siino khibrad isticmaale oo ka sii fiican annagoo farsamo ahaan kaa caawineyna dhibaatadaada maalinlaha ah ee aan la arki karin. Markaan diirada saareyno cilmi baarista iyo adeegsiga tikniyoolajiyadda sifeynta biyaha oo horumarsan, waxaan ku guuleysanay waxqabad aad u wanaagsan xagga badbaadada badeecada, khibradda adeegsadaha iyo qiimaha deegaanka.
Teknolojiyadda joogsiga biyaha daadinta ee patentka leh
Waxaan u oggolaannay shatiyada teknolojiyadda sida guddiga isku-dhafka biyaha ee isku-dhafan, ilaalinta baxsiga biyaha, ilaalinta biyo-yaraanta, beddelka shaandhada oo aan dhib lahayn, xakamaynta caqliga leh, sii-deynta VC, tamar-badbaadinta, iwm. Iyada oo taageero farsamo oo xoog leh, waxaan kuu soo bandhignaa faa iido ganacsi oo dheeri ah maadaama badeecadaada iyo sumaddaadu ay si fiican u soo bixi doonto oo ay si fiican ugu qaban lahayd suuqa aadka loo tartamayo.
Si aan ula jaanqaadno isbeddelada teknolojiyadda, waxaan aasaasnay ​​iskaashiyo qoto dheer leh jaamacado caan ah oo kala duwan oo khibrad u leh baaritaanka shaandhaynta warbaahinta iyo horumarinta. Iyada oo la wadaagayo teknolojiyadda waxaan kor u qaadeynaa awooddeena hal -abuurka oo naga caawisa inaan helno karti badan oo aan kuu soo gudbinno qiime summad leh. Maanta Filter Tech waxay u noqotay shirkad farsamo sare leh oo qaranku aqoonsan yahay.
Koox R&D si fiican u qalabeysan
Waxaan leenahay koox R&D si fiican u qalabeysan oo leh in ka badan 120 injineero. Waxay ku siinayaan xalal sifeynta biyaha oo ka yimid aragtiyo xirfadeed oo kala duwan.
Baahidaada iyo rabitaankaaga ayaa ugu horreeya. Waxaan samaynaa cilmi baaris joogto ah oo suuqgeyn ah waxaanan adeegsannaa madal R&D si aan u abuurno istiraatiijiyad wax soo saar si waafaqsan. Waxaan ku siinnaa alaabta lagu nadiifiyo biyaha guriga oo dhan oo shaqsi ahaaneed iyo xalal laga soo bilaabo meesha laga soo galo ilaa barta isticmaalka.
Iyada oo la raacayo keenista quruxda iyo madadaalada badeecada oo leh fikrad dhiirigelin leh, waxaan ku siinaynaa naqshado alaab iyada oo loo marayo fikradaha hal -abuurka leh iyo kartida naqshadeynta cajiibka ah, kaa caawineysa inaad qabsato isbeddelka suuqa oo aad si fiican u iibiso.
Si fikradda dhiirrigelinta leh loogu beddelo badeecad la gaari karo, annaga oo samaynayna dareen buuxa ee qeexidda badeecadda, waxaan samaynaa naqshad iyo horumarin macquul ah si aan u hubinno in badeecadda lagu horumariyo qiimo jaban, waqti gaaban, haddana leh tayo sare.
Nidaamka Dib -u -noqoshada ugu Wanaagsan, Taabo Nidaamka Shaandhaynta Biyaha, Guryaha Biyaha Sifeeya, Biyo -nadiifiye Biyaha Adag, Kaydadka shaandhaynta, Beddelka Shaandhada Biyaha Kaydadka Biyaha,